Akụkọ - Gịnị bụ Zirconia Block?
Dị ka anyị niile maara na enwere ụdị ihe atọ eji eme mweghachi ezé: ihe mgbochi zirconia na ihe igwe. Zirconium oxide na -eme dị ka ụdị monoclinic, tetragonal na cubic crystal. Enwere ike imepụta akụkụ ndị mebiri emebi n'ụdị kristal na/ma ọ bụ tetragonal. Iji mee ka ihe owuwu kristal ndị a guzosie ike, ekwesịrị ịgbakwunye ndị na -akwalite ihe dị ka magnesium oxide (MgO) ma ọ bụ yttrium oxide (Y2O3) na ZrO2.
Kedu ihe kpatara zirconia ngọngọ bụ ngwaahịa kachasị dabara na eze mweghachi?
Ka anyị kwuo ụdị nhazi zirconia. Ihe mgbochi eze zirconia bụ nke zirconium oxide crystalline, ọ mejupụtara atọm dị na kristal mana anaghị ele ya anya dị ka ọla. N'ihi njirimara ya na -adigide na nke enweghị ike imekọrịta ihe, ndị dọkịta na -awa ahụ ma ọ bụ ndị dọkịta na -eji ihe mgbochi zirconia eze na prostheses dị iche iche. Ọbụnadị a na -eji ya na implants ebe a na -ahụta ya dịka ihe kachasị sie ike.
Agbanyeghị na a na -eji ọtụtụ ngwaahịa na ụlọ ọrụ eze, ihe mgbochi eze zirconia a na -akpọkwa seramiiki bụ ihe ama ama n'etiti ndị dọkịta ezé na ndị ọrịa.
Ụfọdụ uru maka nkanka zirconia blocks:
-Dịka eji arụpụta ọgbara ọhụrụ emepụtara ya. Site n'ịdị nhịahụ siri ike, mmụba ọkụ dị ka nkedo ígwè, ike na -ehulata dị elu na ike ọdụdọ, nguzogide dị elu na iyi na corrosion, conductivity thermal dị ala.
- Ọzọkwa, ụlọ ọrụ obodo kwadoro ya. Ọzọkwa, ihe mgbochi ndị a emeela ụfọdụ nnwale ịdị ọcha, iji jide n'aka na ọ nweghị nchekwa ọ bụla.
Ihe mgbochi eze zirconia bụ ngwaahịa dị oke mma, ọ na-emekwa ka ezé na-adịgide adịgide na eke.
- Ozugbo etinyere ngwaahịa a n'ime onye ọrịa, ọ ga -enye ngwaahịa ahụ ezigbo ndụ.
-Uru ndị ọzọ dị mkpa nke mgbochi zirconia eze a bụ na ọ ga-ebelata oge nkụcha ma melite echiche anya n'oge agba.
- Akụkụ kacha mkpa nke ngwaahịa a bụ na ọ nwere ike nweghachi ọmarịcha ụcha ọ bụla, yana ọ nwere ike dakọtara nha na ụdị ọ bụla.